झापा १ मा ‘कडा टक्कर’ भ्रम र यथार्थ
आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने यू १९ विश्वकप खेल्ने नेपाली यू १९ टोलीको सपना अधुरै, दोस्रो खेलमा बर्षाको कारण डकवर्थ लेविस मेथडका आधारमा यूएईसँग १ रनले पराजित हुनु नै दुुर्भाग्य
पहिलो पटक अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण, नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा
पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्तमा बन्दुकधारीद्वारा बसमा यात्रारत १४ जनाको हत्या
By radiovision on	 November 13, 2017 अर्थ-वाणिज्य, राष्ट्रिय, स्थानीय
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा प्रचार तीब्र छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वार हरसम्भव प्रयासमा छन् । यति मात्र होइन, कहाँ कसको पल्ला भारि छ भन्ने कोणबाट पनि चुनावी चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । कोही घोषित रुपमा मतदातालाई आफुले इच्छाएको, सही ठानेको उम्मेद्वारको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने कोही अघोषित रुपमा प्रचारमा छन् । चुनावको समयमा पक्षधरता स्वभाविक पनि छ । सचेत नागरिकको बसोवास भएको झापा जस्तो जिल्लामा चुनावी चर्चा चुलिएको छ । झापाको चुनावको सन्दर्भमा तथ्यको नजिक रहेर भन्दा काठमाडौंबाट स्वार्थ कन्द्रित र प्रायोजित चर्चा बढी छ । यसले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचमा हिलारी र ट्रम्पको चुनावमा भएको जस्तै परिस्थिति निर्माण गर्दैछ भन्दा अन्यथा नहुने अवस्था छ । यो लेखमा मैले स्थानीय तहको चुनावको परिणामको आधारमा केही तथ्य प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु ।
काठमाडौंका अधिकांश मिडियाले झापा १ को चुनावमा ‘कडा टक्कर’ भन्ने शीर्षमा प्रकाशन गरेका खबरले एउटा झापाली सञ्चारकर्मीको हिसावले झापाली नागरिक समक्ष यथार्थ राख्नु मैले आफ्नो दायित्व सम्झेको छु । तथ्यलाई हेरेर अवस्थाका विषयमा अनुमान लगाउन कुनै कठिन छैन । यस पटक झापाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्वर १ का विषयमा चर्चा गर्नेछु ।
झापाको क्षेत्र नम्वर १ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर १ मा मेचीनगर नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १० र १५ नम्वर वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको ९ नम्वर वडा रहेको छ । स्थानीय तहका ११ वटा वडा रहेको यो क्षेत्रमा ६३,१२८ मतदाता रहेका छन् । ती मतदाताले ७१ वटा मतदान केन्द्रबाट आफ्नो मत व्यक्त गर्ने छन् । मेचीनगर १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका पासाङ तामाङले १२१३ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनु भएको छ । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर सुवेदीले १०९९ मत प्राप्त गर्नु भएको हो । माओवादीका अमृत तामाङले ३०७ मत प्राप्त गर्नुभयो । वडा नम्वर २ मा एमालेका तिलक न्यौपानेले १११८ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो । कांग्रेसका हिम्मत क्षेत्रीले ८१२ मत प्राप्त गर्नुभयो । माओवादीका उत्तम सिठुङ्गले ७१३ मत प्राप्त गर्नुभयो । वडा नम्वर ३ मा एमालेका हर्क बहादुर बस्नेतले १४१२ मत प्राप्त गरी विजयी बन्नुभयो । सो वडामा कांग्रेसका दिपककुमार थापाले ५८८ मत र माओवादीका पुष्पलाल गुरागाईंले ७९८ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वडा नम्वर ४ मा नेपाली कांग्रेसका नविन बराल ९५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । सो वडामा एमालेका अर्जुनकुमार कार्कीले ९०४ र माओवादीका मेघनाथ खड्काले ४३६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वडा नम्वर ५ मा कांग्रेसका योगेन्द्र थापा मगरले १००७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । एमालेका अनन्तकुमार दाहालले ९४२ र माओवादीका कविराज गिरीले २७७ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
मेचीनगर ६ मा कांग्रेसका ललित तामाङ २७४८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । एमालेका खेमराज पोखरेलले २७४६ र माओवादीका भुपाल ओलीले ४५४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वडा नम्वर ७ मा कांग्रेसका चन्दन मेचेले १४५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । एमालेका दिनेश राजवंशीले १४४४ माओवादीका पुनलाल राजवंशीले ९७८ र राप्रपाका चन्द्रप्रसाद निरौलाले ७१८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । वडा नम्वर ८ मा एमालेका विकेन्द्रकुमार धिमालले १४०९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । कांग्रेसका गिरिराज धमलाले १३४९ मत प्राप्त गर्नुभयो भने माओवादीका दिपेन्द्र रिजालले ३०८ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । मेचीनगर १० मा कांग्रेसका सुवेशकुमार पनेरुले २४४३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । एमालेका विशेश्वरप्रसाद भट्टराईले १६७७ मत, माओवादीका हृदय राजवंशीले ५८८ र राप्रपाका कल्याण खड्काले २४३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । मेचीनगरको १५ नम्वर वडामा कांग्रेसका गुणराज भट्टराई १०३३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । एमालेका चेतराज विष्टले १०२७, माओवादीका बसन्त राजवंशीले ८७६ र राप्रपाका इन्द्रबहादुर थापाले २०३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । भद्रपुर ९ नम्वर वडामा एमालेका सनिलाल राजवंशी १२१९ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनु भएको छ । सो वडामा कांग्रेसका राजेन्द्र रिजालले ९३४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । माओवादीका रतन राजवंशीले ३७९ र राप्रपाका नेपालसिंह राजवंशीले २६९ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्वर १ मा एमालेको १५,१११ मत, माओवादीको ६११४ र राप्रपाको १६८१ मत रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । ३ वटा पार्टीका ११ वटा वडामा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत जोड्दा २२,९०६ मत हुन्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षका सबै उम्मेद्वारले १४,४१३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनको मतबाट नेपाली कांग्रेसको मत घटाउँदा ८,४९३ मतको अन्तर देखिन्छ ।
क्षेत्र नम्वर १ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ मा मेचीनगरको वडा नम्वर ९, ११, १२, १३ र १४, भद्रपुरको वडा नम्वर १० तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नम्वर ४, ५, ६ र ७ रहेका छन् । यो क्षेत्रमा स्थानीय तहका १० वटा वडा छन् । यहाँ ४२,३५३ जना मतदाता रहेका छन् । ४९ वटा मतदान केन्द्र रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई हेरेर अवस्था आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ को मेचीनगर ९ मा कांग्रेसका गोपाल खड्का २१६४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । यहाँ एमालेका कञ्चनकुमार तामाङले १८९७ मत र माओवादीका कमलबहादुर रसाइलीले ३९६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । मेचीनगर ११ मा एमालेका सन्तोषकुमार मेचेले ९७१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । यो वडामा माओवादीका शान्तिराम चिमरियाले ६०१ मत, राप्रपाका दिपेश राईले ३२० मत प्राप्त गर्नु भएको छ । कांग्रेसका हरिप्रसाद कार्कीले १८९ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । १२ नम्वर वडामा माओवादीका नरेन्द्र धिमाल ९८० मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । एमालेका मदुसुदन निरौलाले ९७४ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका लालबहादुर चौहानले ५९२ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । १३ नम्वरमा एमालेका कृष्ण सिग्देल ७६४ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनु भएको छ । यो वडामा माओवादीका कुमार भट्टराईले ७२३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । कांग्रेसका पुष्पराज कार्कीले ५८८ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वडा नम्वर १४ मा एमालेका शंकरप्रसाद पोखरेल ९६२ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । यो वडामा माओवादीका बाबुलाल सुव्बाले ८४८ मत प्राप्त गर्नुभयो भने कांग्रेसका सर्त राजवंशीले ५४४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
भद्रपुरको वडा नम्वर १० मा एमालेका टेकबहादुर खड्का १५७८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । यो वडामा माओवादीका भरतसिंह राजवंशीले ४०९ मत र राप्रपाका सुरेन्द्र मैनालीले १७६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने कांग्रेसका अम्वरबहादुर कार्कीले ८८२ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
बुद्धशान्तिको ४ नम्वर वडामा एमालेका बुद्धिमान लिम्वुले १५१३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । यहाँ माओवादीका नारायण ढुङ्गानाले ७६८ मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने कांग्रेसका चेतन ढुङ्गेलले १३७१ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । ५ नम्वर वडामा कांग्रेसका वासुदेव खतिवडा ७५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । यहाँ एमालेका प्रदिप धिमालले ६४९ मत र माओवादीका विक्रम खालिङले २४२ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । ६ नम्वर वडामा एमालेका शम्भुप्रसाद पौडेलले ६५६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । माओवादीका प्रदिप खतिवडाले ८८ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका शिवराज पौडेलले ६३४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वडा नम्वर ७ मा माओवादीका मातृकाप्रसाद पौडेल ३०८ मत प्राप्त गरी विजयी बन्नु भएको छ । यहाँ एमालेका निरकुमार सुवेदीले २५६ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका निधिराम अर्यालले १५४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ मा रहेका १० वटा वडामा एमालेका वडाध्यक्षले १०,२२० मत, माओवादीका वडाध्यक्षले ५३६३ मत र राप्रपाका वडाध्यक्षले ८३४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षको ७८६८ मत रहेको छ । ३ वटा दलका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको १६४१७ मतमा कांग्रेसका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत घटाउँदा ८५४९ मतको अन्तर देखिन्छ ।
अब प्रतिनिधिसभातर्फ कुरा गर्ने हो भने एमाले, माओवादी र राप्रपा गठबन्धनको २१ वटा वडाको मत ३९,३२३ हुन आउँछ भने कांग्रेसका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत २२,२८१ हुन आउँछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको मत अन्तर १७,०४२ रहेको छ । १७ हजार भन्दा बढी मत भएको पक्षलाई कसले कसरी दिन्छ कडा टक्कर ? जनमतले त्यो देखाएको छैन । उल्लेखित तथ्यले झापा क्षेत्र नम्वर १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुई वटै क्षेत्रमा के होला यहाँ बताइरहनु पर्दैन । प्रोपोगण्डाले कति मत प्रभावित होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही मतदाता थपिएका छन् । ती मतदाता दुवैतर्फ बरावर नै छन् भन्दा हुने अवस्था छ ।
भनिन्छ, सामान्यताया मान्छेले आफ्नो विश्वास परिवर्तनका लागि ३ वर्षसम्म पर्खन्छन् । विभिन्न अनुसन्धानले आस्था, विश्वास परिवर्तनका लागि ३ वर्षसम्म लाग्ने ठहर गरेकैले विभिन्न स्थानमा आवधिक निर्वाचनका लागि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको समय निर्धारण गरिएको हो । विभिन्न वडामा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको अवधि ६ महिना पनि नपुगेकाले स्थानीय तहमा मतदान गर्ने नागरिकले आफ्नो आस्था र विश्वासलाई परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
यहाँ एउटा तथ्य बताउन सान्दर्भिक छ । काठमाडौंको एउटा मिडियाका रिपोर्टर झापा आए, उनले क्षेत्र नम्वर १ को अवस्था सार्वजनिक नहोस् भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्वोधन गर्ने एमाले, माओवादी र राप्रपाको क्षेत्रस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाको समयमा कार्यक्रममा जान नदिएर आफ्ना स्थानीय रिपोर्टरलाई क्षेत्र नम्वर ३ तर्फ लिएर गए । पछि उनको मिडियाले काठमाडौंमा राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचारलाई अनलाइनमा प्रकाशन गर्यो । तर, झापा ३ नम्वर क्षेत्रको खबर सो दिन उनको मिडियामा देख्न पाइएन । यसरी मिडिया परिचालित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिष्पर्धा नै नहुने स्थान पनि प्रायोजित रुपमा ‘कडा टक्कर’ भन्ने शीर्षकमा परिरहेका छन् । कडा टक्कर भनेको त अघिल्लो जनमतमा २–४ हजार मात्र मत फरक भएकोसम्म क्षेत्र पर्नु पर्ने होइन र ? त्यसैले मंसिर २१ गतेसम्मको समय मतदाता नै सचेत हुनु पर्ने अवस्था छ ।
झापाको क्षेत्र नम्वर १ लाई कडा टक्कर भएको क्षेत्र संविधानसभाको निर्वाचनलाई हेरेर त्यो वेलाको कतका आधारमा भनिएको हो भने अहिलेको क्षेत्र त साविक चन्द्रगढी, ज्यामिरगढी र दुहागढी थपिएर बनेको क्षेत्र हो । पहिलेको क्षेत्र नै नरहेको अवस्थामा जनमतको आधार चाहिँ पहिलेको हुनु यथार्थ नजिक हुन्छ र ? त्यसैले भ्रमको खेती होइन, यथार्थ नजिकको विश्लेषण आवश्यक छ । यो लेख तयार गर्नका लागि पत्रकार प्रेम आचार्य र मैले १ नम्वर क्षेत्रका दर्जनौं सर्वसाधारणलाई निर्वाचनबारे सोधेका छौं । उनीहरुले पहिलेको समर्थनलाई परिवर्तन गर्ने सोच नरहेको बताएका छन् । त्यसैले अहिले भन्न सकिन्छ, यो चुनाव औपचारिकता मात्र हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेद्वार सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की), प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वार श्रीप्रसाद मैनाली र गोपालचन्द बुढाथोकीले चुनावी कार्यक्रममा मतदान गर्न सिकाउने काम मात्र गरे पनि पुग्ने अवस्था छ ।
अनि राजधानीका मिडियाले मेचीनगर नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका मात्र रहँदा ठीक हुने झापाको क्षेत्र नम्वर १ मा किन बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्वर वडालाई हटाएर भद्रपुर नगरपालिकाका ९ र १० नम्वर वडालाई थपिएको हो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । भद्रपुरका ९ र १० मा जनमत कस्तो छ भन्ने तथ्यांक त निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेभसाइटमा राखेकै छ । यस्तो जानाजान तथ्यलाई मोड्ने काम उचित हो र ?
सन्दर्भ पत्रकारको पनि छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासिचव रमेश विष्ट नेपाली कांग्रेसका नेता वालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन प्रचार समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको ७५ सदस्यीय सुचीको ५७ औं नम्वरमा उहाँको नाम छ । तर, महासंघका झापा अध्यक्ष तारामणि सापकोटा जिल्लाका पत्रकारको फेसवुक आइडिमा भएका निर्वाचन प्रचार सामग्री देखाएर पत्रकारले नराखे राम्रो भन्नुहुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ । महासचिवले प्रचार गर्नु ठिक जिल्लाका पत्रकारले गर्नु वेठिक हो र ? अनि उहाँले सञ्चालन गरेकै अनलाइनमा ‘टुरिष्ट उम्मेद्वार’ भन्ने लेख्नुहुन्छ । कांग्रेसको लेख्नु ठिक अरुको लेख्नु वेठिक भन्ने भ्रमबाट पत्रकार कहिले मुक्त हुने ? एमाले र माओवादी केन्द्रको विचारलाई ठिक लाग्ने पत्रकार चाहिँ तथ्यलाई सार्वजनिक गर्न पनि डराएर प्रतिपक्षी उम्मेद्वार रिसाउँछन् कि भनेर कडा टक्कर भन्ने खबर लेख्न वाध्य छन् । त्यति मात्र होइन, कडा टक्कर नलेखे आफ्नो समाचार प्रकाशन प्रशारण नै हुँदैन भन्ने समस्यामा पनि छन् । के कांग्रेस हुनु चाहिँ स्वतन्त्र हुनु अरु पार्टीका विचार ठीक लाग्नु चाहिँ पक्षधरता हो र ? त्यसैले पत्रकारले ठिकलाई ठिक र वेठिकलाई वेठिक भन्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । तथ्यले भन्छ, के हिजो वडाध्यक्षको उम्मेद्वार हुने मान्छेले आज आफ्नो पार्टी करियरलाई दाउमा राखेर आफ्ना उम्मेद्वारलाई हराउन लाग्छ र ? दुईचार जनाले त्यसै गर्ने हो भने पनि कति मत प्रभावित हुन्छ । अनि के त्यो काम एकपक्षीय एउटै पार्टी र उम्मेद्वारमा मात्र लागु हुने विषय हो र ?
सन्दर्भ काँकरभिट्टाको पनि उठेको छ, काँकरभिट्टामा तरल मत छ, त्यो त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई जान्छ । तर, त्यो एजेण्डालाई बोक्नेहरुले नबुझेको कुरा के हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य भनेको वडाध्यक्ष होइन । जो दिनभर आफ्नै नगर क्षेत्रमा भेटियोस् । प्रतिनिधिसभाको सदस्य काठमाडौं बस्ने हो, मन्त्री बन्ने हो र क्षेत्रको विकासका योजनालाई अगाडि बढ्ने हो । प्रदेशसभाका सदस्य प्रदेशको राजधानीमा बस्ने हो । अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा रहने हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले छनौट गरेका योजना प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदले अगाडि बढाउने हो । झापा जस्तो सचेत नागरिकको बसोवास भएको जिल्लामा यस्ता भ्रम कसले पत्याउँछन् ?
त्यसैले भन्न सकिन्छ, झापाको १ नम्वर क्षेत्रमा छैन टक्कर । निर्वाचनको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बाँकी छ । यो औपचारिकतालाई उत्साहका साथ अगाडि बढाउने जिम्मा क्षेत्र नम्वर १ का बामपन्थी देशभक्त राष्ट्रवादी गठबन्धनका कार्यकर्ताको हो, जसले झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको बाम आन्दोलनका अग्रणी, एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकताका सुत्राधार राम कार्की जस्तो नेतृत्व प्राप्त गर्नु भएको छ । अनि स्थानीय क्षेत्रमा स्थापित श्रीप्रसाद मैनाली र गोपालचन्द्र बुढाथोकी जस्तो स्थानीय संगठनका अभिभावकलाई अहिले उम्मेद्वारका रुपमा प्राप्त गर्नु भएको छ । क्षेत्र नम्वर १ का मतदातालाई सम्बृद्धिको अभियानमा अग्रणी बन्न हार्दिक शुभकामना ।